Ndị na-emepụta ikuku ọkụ ọkụ - China Air Heat Exchangers Factory & Suppliers
Vetikal Type Okpomọkụ mgbapụta Energy Okpomọkụ Iweghachite Ventilator
Buit-na okpomọkụ mgbapụta usoro iji nweta otutu mgbake ike na elu arụmọrụ; Ọ nwere ike na-wok dị ka ọhụrụ ikuku conditioner na azụmahịa oge, ezi onye na ntụ oyi usoro; Temperaturenọgide okpomọkụ na iru mmiri akara nke ọhụrụ ikuku, na CO2 ịta akara, na-emerụ gas na PM2.5 ọcha na-eme ka ikuku dị jụụ na ahụike. Njirimara nke Vetikal Type Okpomọkụ mgbapụta Energy Okpomọkụ Recovery Ventilator:
Residential Energy Recovery Ventilator na Esịtidem purifier
Atọ-oyi akwa elu-arụmọrụ filtration usoro: isi iyo, ọkara nyo na HEPA elu arụmọrụ iyo. Ngwunye ọrụ PM2.5 dị ọcha nke igwe dum dị ruo 99%. Zinc-aluminom alloy panel nwere nnukwu mgbochi corrosion arụmọrụ ma dị mfe ma mara mma. EPP jikọtara ya n'ime ụlọ ma ọ bụrụ na ọ nwere ike dị elu, nkwụsi ike, nchekwa gburugburu ebe obibi na enweghị isi. DC moto nke 5 ọsọ, obere ike oriri, obere mkpọtụ na ogologo ndụ. Ihe ohuru emere ...
Ọhụrụ Air Dehumidifier
Ilebara ikuku anya na iru mmiri n'ime ụlọ gị dị mkpa maka ahụike na nkasi obi gị, yana nchekwa maka ụlọ gị na ihe onwunwe gị. Ezubere Holtop Central dehumidifier iji rụọ ọrụ na sistemu HVAC ndị ọzọ iji weta ikuku dị ọcha na nke dị ọcha n'ụlọ gị. Arụ ọrụ ụkpụrụ nke Holtop Fresh Air Dehumidification Systems The Holtop ọhụrụ ikuku ọcha na dehumidification usoro adopts ụkpụrụ nke jụrụ dehumidification. Site na mbenata okpomọkụ nke ikuku, oke ...
Ezi uche Crossflow efere Okpomọkụ Exchangers
Workingkpụrụ ọrụ nke Sensible Crossflow Plate Heat Exchangers: Abụọ agbata obi aluminum foils na-etolite ọwa maka ọhụrụ ma ọ bụ iyuzucha ikuku iyi. A na-enyefe okpomọkụ mgbe mmiri ikuku na-asọfe agafe na ọwa, na ikuku ọhụrụ na ikuku na-ekpochapụ kpamkpam. Atụmatụ: Nghọta okpomọkụ mgbake Total nkewa nke ọhụrụ ikuku & iyuzucha ikuku iyi Okpomọkụ mgbake arụmọrụ ruo 80% 2-n'akụkụ pịa shaping Ugboro abụọ apịaji ihu Kpamkpam nkwonkwo akara. Nguzogide nke nrụgide dị iche ...
Cross Counterflow efere Okpomọkụ Exchangers
Principlekpụrụ ọrụ nke Cross Counterflow Sensible Air to Air Plate Heat Exchangers: Abụọ agbata obi aluminum foils na-etolite a ọwa maka ọhụrụ ma ọ bụ iyuzucha ikuku iyi. A na-enyefe ikpo ọkụ mgbe mmiri ikuku nke ikuku na-agafe agafe na iyi mmiri ikuku na-asọba site na ọwa, ikuku dị iche na ikuku na-ekpochapụ kpamkpam. Main atụmatụ: 1.Sensible okpomọkụ mgbake 2.Total nkewa nke ọhụrụ & iyuzucha ikuku iyi 3.Heat mgbake arụmọrụ ruo 90% 4.2-n'akụkụ pịa shaping 5 ....
Crossflow efere Fin Total Okpomọkụ Exchangers
Workingkpụrụ Ọrụ nke Holtop Crossflow Plate Fin Total Heat Exchangers (ER Paper for enthalpy exchange core) Mpempe akwụkwọ mbadamba na efere ndị a na-agbanye na-emepụta ọwa maka ikuku ikuku ma ọ bụ nke na-ekpochapu. Mgbe ikuku ikuku abụọ ahụ na-agafe na onye na-ere ahịa na-agafe na mgbanwe dị iche iche, ike enwetara. Ihe ndị bụ isi 1. Ejiri akwụkwọ ER, nke a na-egosipụta site na oke mmiri permeability, ikuku ikuku dị mma, nguzogide akwa akwa, na ịka nká. 2. Haziri ahazi ...
N'uko Okpomọkụ mgbapụta Energy Okpomọkụ Recovery Ventilation System
Dika mmepe nke onodu aku na uba, iji oke oku na mmanu mmanu meputa uzuzu, carbon dioxide, sulphur dioxide na ihe ndi ozo ojoo, nke na-eduga na onodu ojoo, mmebi ikuku siri ike, na-eme ka otutu ihe di nma (PM2.5). Ọ na-emetụta ọrụ anyị, ndụ na ahụ ike anyị. Tụnyere ndị ọhụrụ ọhụrụ ikuku Exchanger, n'okpuru bụ anyị uru: 1.The abụọ-ogbo okpomọkụ mgbake usoro na okpomọkụ mgbapụta na ikuku okpomọkụ Exchanger. 2.Benyere ventilatio ...
Akwụsịtụrụ Okpomọkụ Energy Recovery Ventilators
Ndị na-ekpo ọkụ ọkụ na-ewepụta ikuku bụ sistemụ ikuku ikuku na-enye ikuku ọhụrụ, wepu ikuku ikuku dị n'ime ụlọ ma dozie iru mmiri n'ime ụlọ. E wezụga nke ahụ, ha nwere ike iji ọkụ natara site na ikuku ochie iji kpoo ikuku dị ọcha na okpomọkụ dị mma. Ihe a niile na-enyere aka ịmepụta gburugburu ebe dị ọcha ma dị mma nke na-eme ka ahụ dị mma nke ndị ọrụ ụlọ. Main Njirimara nke Eco-Smart HEPA Energy Recovery Ventilators: Wide nso ikuku olu si 150m3 / h ka 6000m3 / h, 10 gbapụrụ ọsọ cont ...
Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya na Energy Recovery Ventilators
Otutu HEPA ọcha nke 99% Ime ụlọ & n'èzí airfiltration High arụmọrụ okpomọkụ na iru mmiri mgbake maka kachasị ikuku nkasi obi Ime ụlọ nta positivepressure na-n'èzí mmetọ ikuku pụọ elu arụmọrụ ofufe na DC Motors Remote akara Air quality Index (AQI) nlekota nkịtị ịgbachi nkịtị arụmọrụ echichi
Vetikal Energy Iweghachite Ventilator na HEPA Filters
Ntinye okpukpu atọ 99% HEPA filtration Obere nrụgide ime ụlọ Ọdịdị dị elu ike mgbake Nhọrọ oke arụmọrụ na arụmọrụ DC arụmọrụ dị elu Njikwa ihe eji eme ihe Nleba anya njikwa LCD ngosi Vertical Energy Recovery Ventilators
Main atụmatụ nke rotary okpomọkụ Exchanger: 1. Akwa arụmọrụ nke ezi uche ma ọ bụ enthalpy okpomọkụ mgbake 2. Ugboro abụọ labyrinth akara usoro ana achi achi kacha nta ikuku leakage. 3. Mgbalị nke ihicha onwe ya na-agbatị oge ọrụ, na-ebelata ụgwọ mmezi. 4. Ugboro abụọ purge oru na-ebenata carryover si iyuzucha ikuku n'ime ọkọnọ ikuku iyi. 5. Ndụ-oge lubricated amị na-achọ ọ mmezi n'okpuru nkịtị ojiji. 6. A na-eji ọnụ ụlọ dị n’ime ụlọ wee mepụta igwe latrịl iji mee ka ọ dị ụsọ. 7. ...
Isi Njirimara nke Okpomọkụ Pipe Okpomọkụ Exchangers 1. Itinye cooper tube na hydrophilic aluminum fin, ala ikuku na-eguzogide, na-erughị condensing mmiri, mma mgbochi corrosion. 2. Galvanized ígwè etiti, ezi iguzogide corrosion na elu anwụ ngwa ngwa. 3. Akụkụ mkpuchi ikpo ọkụ na-ekewa isi iyi ọkụ na isi iyi oyi, mgbe ahụ mmiri mmiri n'ime ọkpọkọ enweghị ntụgharị okpomọkụ na mpụga. 4. Pụrụ iche n'ime mbuaha ikuku Ọdịdị, ihe edo airflow nkesa, na-eme okpomọkụ mgbanwe ọzọ zuru ezu. 5. Dị iche iche wor ...